Akụkọ - Imikpu n'ime mmiri Ikanụ Ice Cube
Mmiri kpụkọrọ akpụkọ na-enwu enwu nke ọkụ na-enwu, ahụ ga-enwu gbaa na-akpaghị aka mgbe etinyere ya na mmiri ma ọ bụ cubes ice, na-enweghị ntụgharị akwụkwọ ntuziaka, enweghị mgbanwe kemịkal, anaghị egbu egbu na enweghị mmerụ ahụ, enwere ike itinye ya n'ụdị mmanya ọ bụla iji gbakwunye ịhụnanya ịhụnanya. na ikuku dị omimi.
A na -ejikarị ya eme ememme dị iche iche ma ọ bụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ndị ọzọ, na -emepụta ikuku ihunanya dị nro na nke mara mma na -adịghị ahụ anya.
Igwe kpụkọrọ akpụkọ na-enwu enwu nke ihe nri PS na ihe elektrọnik nwere njirimara nke na-enwu enwu mgbe ha na-abanye na mmiri (ntinye mmiri)
Ngwaahịa a na-eji kpụkọrọ akpụkọ kpụkọrọ akpụkọ mejupụtara ihe nri PS ihe nri yana ngwa elektrọnikị, nke nwere njirimara nke na-enwu enwu mgbe ọ na-abanye mmiri (ntinye mmiri), na ọdịdị ya dị ka ezigbo akpụ akpụ. Enwere eletriki eletriki n'ime ngwaahịa ahụ, nke enwere ike itinye n'ụdị mmanya ọ bụla iji gbakwunye ikuku ihunanya na ihe omimi. A na -ejikarị ya ememme dị iche iche ma ọ bụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ndị ọzọ. Oge ọkụ na-aga n'ihu: 8-25 awa.
Gbanwee ọnọdụ: Ntinye mmiri, na -enwu mgbe mmiri metụrụ ya Ojiji: Hichaa ice cube na -enwu enwu wee tinye ya na mmiri, ọ ga -enwu gbaa na -akpaghị aka, ngwaahịa enwere ike ịtụfu, Rịba ama: ilo, ma zere itinye ya na mmanya dị oke ọkụ.
Ncheta: Enwere ike iji mmanya kpụrụ mmanya na -egbu ya, mana ịnweghị ike itinye ihe ọ drinksụ withụ nwere oke okpomọkụ.
Batrị ahụ enweghị ike dochie anya ya, mgbe ọ wepụsịrị mkpụrụ mmiri ice, ọ ga-amụnye ọkụ ọbụlagodi ma ị jiri aka jide ya. Njirimara Njirimara. nke ịdị na -enwu enwu mgbe ị na -abanye mmiri (ntinye mmiri), na ọdịdị ya dị ka ezigbo akpụ akpụ. Ngwaahịa nwere batrị, ọ nweghị mgbanwe kemịkal, anaghị egbu egbu na enweghị mmerụ ahụ, enwere ike itinye ya na mmanya dị iche iche iji gbakwunye ikuku ihunanya na ihe omimi. A na -ejikarị ya ememme dị iche iche ma ọ bụ ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe ndị ọzọ.